GAME OF THRONES ရာသီ (၈) ကြိမ်မြောက် ၅ ချက်တွင်ပြသထားသည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည် - သတင်း
ပြပွဲ၌သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် Thrones ဂိမ်းမှ 'ခေါင်းလောင်း' ၅၅ ခုမှမှတ်စုများ
ယခုတနင်္ဂနွေတွင် Game of Thrones ရာသီရှစ်ကြိမ်မြောက် The Bells ကိုတွေ့ရသည်။ ယခုရာသီ၏ Game of Thrones သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တက်လာပြီးယခုအပတ်မှဇာတ်လမ်းတွဲသည်ကွဲပြားခြားနားသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ တချို့ကဒါဟာလုံးဝစို့ဟုဆိုသည် , အခြားပရိသတ်တွေကလုံးဝကိုချစ်၏။ တစ်ခုခုကိုလမ်းယခုရာသီအတွက်တသမတ်တည်းခဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ memes ဖြစ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ Twitter အချိန်ဇယားသည် Game of Thrones ရာသီ ၈ အပိုင်း ၅ မှတ်စုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ခေါင်းလောင်းပြပွဲသည်အစဉ်အမြဲအဆုံးသတ်တော့မည်ကိုဆိုလိုသည်သော Thrones '' ၏ကြိုတင်ရူပဗေဒဇာတ်လမ်း၏ဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ ၅၅ အထွGame်အထိပ်ရာဇ ၀ င် Game of Thrones ရာသီ ၈ အပိုင်း ၅ မှတ်စုများကိုသင်ကြည့်ရှုပါ။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လုံးသင်ရရန်တစ်ခုတည်းသောမှတ်စုများစာရင်း။
အားလုံးအကောင်းဆုံး Thrones ရာသီရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ5memes:
မီးခိုးရောင် worm: #GamefThrones
-? (@HazzR__) မေလ 13, 2019
အဆိုပါခေါင်းလောင်းမြည်ပြီးနောက် Dany #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/pIPJURkzoO
- ဖိလစ် (@Phil_Lewis_) မေလ 13, 2019
Tywin အသက်ရှင်သေးလျှင်? #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/zfl52PEdwa
- Thrones Memes ဂိမ်း (@Thrones_Memes) မေလ 12, 2019
မကောင်းတဲ့inရိယာ၌ usc ဖြစ်ပါတယ်
ရာသီ (၇) ခုအတွက်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ - အပြစ်မဲ့သူအားမည်သည့်အခါမျှထိခိုက်စေခြင်း၊
daenerys season 8: လက်နက်ချခြင်းခေါင်းလောင်းသံကြားရပြီးအချို့သောကြောက်စရာကောင်းသည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့သူများကိုသတ်ဖြတ်သည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ
- ً (@targarcyn) မေလ 13, 2019
Arya ကိုအမြဲကြည့်နေရင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောမြင်ကွင်းနီးပါးဖြစ်သည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/EuZzz76nAh
- Trace Simi (theesimi) မေလ 13, 2019
Cersei ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ငါ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #TheLastWar pic.twitter.com/QQaEbc9GwG
- House of Stark ၏ကေး (@sayheykay_) မေလ 12, 2019
ခေါင်းလောင်းသံကြားပြီးနောက် Daenerys pic.twitter.com/0S3k6SCIKF
- TMY (@tianamarcus_) မေလ 13, 2019
ဒီစစ်ပွဲပြီးနောက် finna ဘယ်လို daenerys #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/MgMh425Qtt
- Lee Harden (@_SinOfGreed) မေလ 13, 2019
ငါဒီမှာခြားနားချက်ကိုမမြင်ရ ... #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #GoT pic.twitter.com/uqBWkodm8G
- Nora Dominick (@noradominick) မေလ 13, 2019
- alistair chernobyl (@penis_hernandez) မေလ 13, 2019
Daenerys နှင့် Cersei တို့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဖျက်ဆီးပြီးနောက်ပလ္လင်တော်အတွင်းသို့လမ်းလျှောက် Sansa #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/mFiaiuQR1r
- A (i3_95 @) မေလ 13, 2019
အစိုးရအတွက်လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်း // တွင် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/0XOsHNKPLa
-? (@its__kojack) မေလ 13, 2019
ငါဂျော့ခ်ျ RR မာတင်၏အိမ်သို့သွားအစစ်အမှန်ကြည့်ရှုရန်သူ၏မူကြမ်းကြည့်ရှုရန် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ အဆုံးသတ် pic.twitter.com/yFQm2aBfMO
- FYE (faizaanbk) မေလ 13, 2019
သူတို့ရဲ့ကလေးကို Daenerys, Dany, ဒါမှမဟုတ် Khaleesi ဆိုတဲ့မိဘတွေရဲ့မျက်နှာ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/3MOTy0ZFIJ
- Jesse Johnson (@jestertrog) မေလ 13, 2019
ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကောင်းကင်၌ကွဲပြား #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/5R8SxTy50D
- Danez Smith (@Danez_Smif) မေလ 13, 2019
Varys, Sansa, Arya, Tyrion နှင့်အခြားအရာအားလုံး: #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/dXOahZ4VGF
- ဂျူလီယန် Hagins (@ julian_hagins1) မေလ 13, 2019
ငါ Cersei က Hound နှင့်တောင်ကြားတွင်ခြေရာခံနေသည်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/ef1s7JtyBo
- အ Baddie bey? (@baddiexbeyy) မေလ 13, 2019
ဘုရားသခင် Dany တွင် AirPods ပါ ၀ င်သည်။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/dSArGec2d7
- Josh Go (@Juice_M_Go) မေလ 13, 2019
Tyrion S4: စန်းနက်စ်ကိုမင်းတွေအများကြီးမီးမွှေးပေးသင့်တယ်၊ ဘုရင်တွေအားလုံးအတွက်အဆိပ်သင့်စေချင်တယ်။
Tyrion S8: ဂျီနီဗာစည်းဝေးကြီးတွေကမင်းရဲ့ကျေးဇူးတော်လား
- ငါဘာမှမမျှော်လင့်ပဲစိတ်ဓာတ်ကျနေဆဲ (@thelindsayellis) မေလ 12, 2019
Euron: ငါဘုရင်မကြီးကို fuck ဆိုတဲ့
- Moosa Starkaryen (Moosa_IRQ) မေလ 13, 2019
၏စာရေးဆရာများ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ကဲ့သို့သော Dany ၏ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ pic.twitter.com/Tc6JdFOxuS
- Ski.com (@SxKxYxExxxx) မေလ 13, 2019
ငါ့ကိုစာရေးဆရာများမှငါ့ကို #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/PMo4pfR4vG
- ???? ????????? (@flukefliks) မေလ 13, 2019
ငါသမျှသော maddddd banter လက်လွတ် pic.twitter.com/qMecBBGr7N
- Uwomano Okakoso (@Datboimano) မေလ 12, 2019
Kings Landing ရှိ Jon Snow #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #Given pic.twitter.com/OPrSPlDYWg
- MJ-Phoenix (@FireWPhoenix) မေလ 13, 2019
Cersei: #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #DemThrones pic.twitter.com/Z9H7AcNvMX
- Kendally Brown (@kendallybrown) မေလ 13, 2019
သူလာတော့မည့်အရာကိုသိသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားသည်။ #GoT #DemThrones pic.twitter.com/eecVelV3Xx
- Brittany Packnett (@MsPackyetti) မေလ 13, 2019
ငါဘယ်လိုနှင့်အတူအလွန်စစ်မှန်စွာမကျေနပ်ကြပါ၏ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ Jon Snow သည်သူပြုံးပြပြီးပစ်ချလိုက်သောကားပေါ်တွင်မထိုင်ပါကပြပွဲတစ်ခုလုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည် pic.twitter.com/8YlxJDM6M3
- Seany Macs (@seanmacdougaall) မေလ 13, 2019
D&D သည် Jaime ၏ရွေးနုတ်ခြင်း arc၊ အပြစ်မဲ့ဇာတ်လမ်း၏ Dany ၏အကာအကွယ်တစ်ခုလုံး၊ Arya ၏ faceless လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ Bran ၏3မျက်လုံးကျီးစွမ်းရည်များနှင့်ရွှေကုမ္ပဏီပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်မှုအားလုံးတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ တကယ်လား ?? #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ # GOTS8E5 pic.twitter.com/cOBBdODEAT
- နာတာလီ (@cerealbananas) မေလ 13, 2019
Winterfell ၌ဤတစ်ခုလုံးကိုဇာတ်လမ်းတွဲ chilling Sansa #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/0Z2VZLuuUT
- ဆမ် Stryker (@sbstryker) မေလ 13, 2019
ခုနစျပါးနိုငျငံတျော၌ရယ်စရာအကောင်းဆုံးသေမင်း၏တိတ်ဆိတ်ယခုအချိန်တွင် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/c2veuPUD4T
- fuming (@phonoxide) မေလ 13, 2019
- Rose Dommu (@rosedommu) မေလ 13, 2019
နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲပြီးနောက် Jon To Dany #GOT pic.twitter.com/TbHdkeXvnL
- Larry သည်အိပ်မက်မက်ခဲ့သည် (@HustleHolman) မေလ 13, 2019
- ရှုပ်ထွေးသော (@Complex) မေလ 13, 2019
Canyi Dany အရာအားလုံးကိုစတင်လောင်ကျွမ်းသောအခါ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/sGL7xQ7AQd
- Buhle ဂျူနီယာ (@BNgxande) မေလ 13, 2019
ကြောင်းဇာတ်လမ်းတွဲပြီးနောက် Drogon #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/hUQtS8Btya
- Angèleပန်ကာအကောင့် (@COFFINBORNEGOD) မေလ 13, 2019
Cersei သည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးလူကြမ်းများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအခြေခံအဆောက်အ ဦး ပျက်ယွင်းခြင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/zccMLMkuca
- အနက်ရောင်ဒိုင်းနမိုက် (@theblackercaleb) မေလ 13, 2019
ငါတွေးမိတာကတော့ဂျေမီက Cersei ကိုသတ်ဖို့ Brienne ကိုထားခဲ့တယ် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/nYeiRnxPI5
- မခိုင်မြဲသော Capricorn (@http_stardust) မေလ 13, 2019
Cersei ကိုသတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ
၁။ Jaime က Cersei ကိုသတ်တယ်
၂။ The King က Cersei ကိုသတ်သည်
(၄) Drogon သည် Cersei ကိုသေစေသည်
၁၅။ Bran သည် Cersei သို့ ဝင်၍ သတ်သေသည်
1,672 ။ ကျောက်များဖြင့်နင်းရ
- Free Thinker (@ kamusigi9) မေလ 13, 2019
Daenerys King ရဲ့ကမ်းတက်၌ရှိသမျှသောသူမ၏အသစ်သောဘာသာရပ်များအပေါ်အုပ်ချုပ် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/PTibzLTl4E
- Jacob Howle (@jacobhowle) မေလ 13, 2019
Heaven မှာ Missandei က 'Dracarys ငါပြောခဲ့တာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/QBj8tdU1GD
- c (@chuuzus) မေလ 13, 2019
အဲဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဂုဏ်အသရေကိုစွန့်ခွာခဲ့သူ Jaime Lannister ဟာအပြစ်မဲ့သူမဟုတ်ရင်အခြားသူတွေကိုငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အရမ်းရယ်ရတယ်ဒါ D & D ဟာသူတို့ရဲ့သူကပြောတဲ့ပြပွဲကတဆင့်အိပ်ခဲ့ရတယ် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ
- Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) မေလ 13, 2019
Daenerys ကဆင်းမီးလောင်နေစဉ်ရှငျဘုရငျ၏ဆင်းသက်၏နိုင်ငံသားများ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/G7mrtt17Oc
- ဖရိုဖရဲမြူနီစီပယ် (@colossal_moron) မေလ 13, 2019
ည၏တိကျမှန်ကန်သော meme ။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/UefUdTwmIr
- berserk (@srslyberserk) မေလ 13, 2019
ရာဇပလ္လင်ရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ5၏ဂိမ်း pic.twitter.com/SBr89pW991
- ဒီဇင်ဘာ (@declancooper_) မေလ 13, 2019
Jon ကလူတွေကိုသတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောင်တရခဲ့တယ်။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/AV44gE6u0P
- Abd (Z4H1IR @) မေလ 13, 2019
သူမကခေါင်းလောင်းကြားတဲ့အခါ Dany #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/jvX50aMsVg
- မက်ကာသီ Dietz (@dax_mietz) မေလ 13, 2019
ရာသီ (၈) ရာသီ။ Cersei Lanister သေဆုံးပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်အကြည်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ရန်ရာသီ (၈) ခုလုံး။
သငျသညျ Arya သူမ၏သတ်ပစ်မယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်
Cersei သည်ကျောက်တုံးများဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/5puSTESa9M
- The HénryNevoír (@Hxnry_Nevoir) မေလ 13, 2019
သူတို့ပြန်လာပြီး Sansa မှန်တယ်ဆိုတာဝန်ခံရတဲ့အခါ Jon နှင့် Tyrion #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #GoT pic.twitter.com/5evBWFT98W
- Varys မှန်တယ် (@ connor_254) မေလ 13, 2019
Hers နှင့်တောင်ကြားလမ်းလျှောက်နေသော Cersei … pic.twitter.com/frHAHUJi19
- North Remembers (@starkhanesi) မေလ 13, 2019
Euron Greyjoy သည်သူအသက်ရှင်စဉ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်
- ရွိုင်း (@_WonderRoy) မေလ 13, 2019
မြင်း - ဒီနေ့နီးပြီ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/tDIhziwe6N
- Kiersten (@ kdo96) မေလ 13, 2019
မြင်း - မင်းရဲ့ Uber ရောက်လာပြီ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/HAvj0r4gQG
- kyle (@kayleeykremee) မေလ 13, 2019
Game of Thrones ရာသီရှစ်ခု၊ ဇာတ်လမ်းတွဲခြောက်ခုနှင့်မည်မျှဇာတ်လမ်းတွဲရှိသနည်း။
ရာသီရှစ်ကြိမ်မြောက် Game of Thrones ဇာတ်ကားခြောက်ခုသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ HBO တွင်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၉း၀၀ နာရီတွင်တင်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်တွင်, ဒီခဲယဉ်း core ကိုပရိတ်သတ်များအဘို့, 2am start ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို Sky Atlantic တွင်ပြသပြီးတနင်္လာနေ့ညနေ၌ထပ်မံပြုလုပ်သည်။ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲအားလုံးကို Now TV တွင်လည်းလွှင့်နိုင်သည်။
ဤသည်ပြပွဲ၏အဆုံးကိုမြင်သောဂိမ်း Thrones ရာသီရှစ်၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဒီမှာရှိလိမ့်မည် Game of Thrones: The Last Watch ဟုခေါ်သောနောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအပြီးဖြန့်ချိသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ TO သို့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များအတွက်နောက်တွဲယာဉ် (တစ်ရှူးများအဆင်သင့်နှင့်အတူ) ဤနေရာတွင်စောင့်ကြည့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
• ဒါကငါပဲလားဒါမှမဟုတ် Game of Thrones ၏နောက်ဆုံးရာသီကိုစုပ်ယူသလား။
• Game of Thrones မှအများဆုံး ၈၃ ကြိမ်မြောက် Memes: The Stark of the Last
• Game of Thrones ဇာတ်ကောင်များသည် uni တွင်ရောက်နေပါက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်